Xildhibaan ka tirsanaa baarlamaankii KMG oo noqday qofkii fuliyay qaraxii garoonka Aadan Cadde - Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Xildhibaan ka tirsanaa baarlamaankii KMG oo noqday qofkii fuliyay qaraxii garoonka Aadan Cadde
Xildhibaan hore uga tirsanaa baalarmaankii KMG ee Soomaaliya ayaa la sheegay inuu ahaa qofkii fuliyay mid ka mid ah qaraxyadii maanta ka dhacay agagaarka garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Shaqsigaan oo lagu magacaabo Saalax Nuux Ismaaciil (Saalax Badbaado) ayaa Idaacadda Al-Andulus ee afka Shabaab ku hadasha kasii deysay codkiisa oo la duubay kahor inta uusan qaraxa fulinin.
Saalax Badbaado oo kasoo jeeda gobolada waqooyi ee Somaliland, ayaa sida la sheegay ka goostay Baarlmaaanka islamarkaana ku biiray Xarakada Al-shabaab sanadkii 2010-ka, wuxuuna tan iyo xilligaasi ka tirsanaa kooxda Al-shabaab, iyadoona ay la yaab noqotay inuu xildhibaan hore isku bedelo is-miidaamiye isku qarxiyay magaalada Muqdisho.
Dhinaca kale, Saalax Badbaado ayaa la sheegay inuu ahaa shaqsigii kaxeeynayay gaarigii weerarka koowaad lagu qaaday goob ay ciidamada amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya ka ilaaliyaan garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde.
Si kastaba ha ahaatee, arrintaan oo ay shacabka Soomaaliyeed la-yaab ku noqotay ayaa noqoneysa midii ugu horeeysay ee qof xil ceynkaan oo kale ah kasoo qabta dowlad Soomaaliyeed uu ku lug yeesho fal argagaxiso ah oo uu qarax naftiisa ku haligay.